Famintinana ny Vovonan’ny Fampahalalam-baovaon’Olon-tsotra Global Voices – Andro faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2019 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Aymara, Português, Français, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jolay 2012)
Sary niarahan'ny vondrona naka nandritra ny Vovonana 2012
Nanomboka ny andro faharoa sady farany tamin'ny Vovonan'ny Fampahalalam-baovaon'Olon-tsotra Global Voices raha nifarana niaraka tamin'ny hirahira ny alina voalohany. Raha namafa ny torimasony ireo mpanatrika ary naka toerana dia nisy tarika mpiangaly mozika, ny tarika Sheru ni Sheru, niakatra an-tsehatra, nidoboka amponga sy nandihy niantso ho amin'ny fifohazana maraina.
Rehefa taitra tanteraka, nampahafantarina an'i Boukary Konaté avy ao Mali sy Victoria Tinta avy any Bolivia, izay samy mpandresy tamin'ny loka GV Rising Voices ireo mpanatrika ny Vovonana. Mitantana ny tetikasa “Fifandraisan'ny Tananakely ao Segu” miaraka amin'ny olon-kafa i Boukary, izay mandeha any amin'ny sekoly rehetra any ambanivohitr'i Mali, amin'ny famoronana fifandraisana ara-kolontsaina eo amin'ny tanànakely sy ny tanàndehibe ary mampianatra ny olona ny fomba fampiasana ny aterineto.
Nihalehibe tao Bolivia kosa i Victoria Tinta, etsy ankilany, ary miteny ny fitenin'ny indizeny Aymara. Nanomboka nampiasa ny aterineto izy tany amin'ny oniversite mba hanentanana ny vondrom-piarahamonina Aymara. Miara-miasa amin'ny vondrona antsoina hoe Jaqi Aru izy, izay mitantana ny atrikasa fibilaogina ho an'ireo mpampiasa ny fiteny Aymara mba hanabe voho ny fisian'ity fiteny ity an-tserasera.
Nizara ekipa telo ho an'ny famelabelaran-kevitra manokana ny vovonana. Nanomboka ny lohateny manaitaitra hoe: “Moa ve mijery ahy izy ireo?” i Jillian York, izay nahitana ny adihevitra momba ny fifandonana eo amin'ny fanaraha-maso henjana voamarina sy ny filàna ny fahalalahan'ny tsiambaratelon'ny fiainana manokana sy ny fahalalahana ara-politika. Nanadihady ny fifanakalozana eo amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fangaraharana i Robert Faris, talen'ny fikarohana ao amin'ny Ivontoerana Berkman ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina, raha namaritra ny loza sy ny sakana mety ho hitan'ireo mpanohitra manoloana ny fanaraha-maso ataon'ny governemanta sy ny orinasa kosa ireo mpitati-baovaon'ny olom-pirenena ao an-toerana ry Afef Abrougui avy any Tonizia sy Mohamed El Gohary avy any Egypta .
Nandritra io fivoriana io ihany, niresaka momba ny fampahalalam-baovaon'ny fahasalamana ifandraisana anjara sy ny fomba fielezan'ny tantaran'ny mpiasan'ny fahasalamana manokana antserasera sady afaka miteraka fihetseham-po no manome toro-hevitra ho an'ny firenena an-dàlam-pandrosoana ny famelabelaran-kevitra iray hafa. Tao anaty ekipa hafa, nivory ireo mpandray fitenenana mba hiresaka ny antony ilana manokana ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ny fikarakarana ny hetsika goavana, mifantoka manokana amin'i Kenya.
Niverina indray ny vovonana tamin'ny andiany faharoa amin'ny fizarana samihafa rehefa avy niato kely tamin'ny fisotroana kafe. Nandrindra ny ‘Data Visualization’ i Gilad Lotan, avy ao amin'ny SocialFlow izay namelabelatra momba ny fomba hanangonana sy handaminana ary hanaovana tetikasan-torohay eo amin'ny siantifika sy ny mpikatroka. Nitarika famelabelaran-kevitra samihafa momba ny fandraisana anjaran'ireo olom-pirenena amin'ny hoavin'ny Aterineto ny mpiara-manorina ny GV, Rebecca MacKinnon, ary nangataka ireo mpanatrika hiresaka ny fomba ataon'ny olon-tsotra rehefa tsy mahavita miaro ny tombotsoam-bahoaka ny governemanta. Nisy ekipa fahatelo niadihevitra momba ny fanamby amin'ny ‘famoronana ny tambajotra Afrikana’, sy ny momba ny zavatra ilaina mba hananganana ny fifandraisana sy ny firaisankina eo amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra eo an-toerana sy ny tontolo ivelany mba hanohanana ny tetikasa toy izany.
Taorian'ny sakafo antoandro, nanatontosa andiana fandaharana misokatra roa izay nahitana lohahevitra samihafa hatramin'ny am-polony, anisan'izany ny fifandraisan'i Shina-Afrika, ny vehivavy sy ny teknolojia, ary ny fitovozana maimaimpoana ny vovonana. Farany, nomena voninahitra ny mpiara-manorina sy ny mpikarakara ny Global Voices talohan'ny nifaranan'ny vovonana niaraka tamin'ny takarivan'ny hira ny hariva sy ny fihinanana kitonotono Kenyana. Nanakatona ny vovonana ny tale mpanatanteraka sy ny tale mpitantana Ivan Sigal sy Georgia Popplewell, nitsangana ary nanamarika izany fotoana izany tamin'ny tehaka sy ny tsikitsiky ny mpikambana GV sy ny mpilatsaka an-tsitrapo, ary ny manam-pahaizana sy ny mpitsidika tao an-toerana maherin'ny 200.
Mandrapihaona indray amin'ny Vovonana manaraka!